के म एकलकेयर प्रयोग गर्दा बीमा प्रतिपूर्तिहरू पाउनेछु? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर खेलहरु मनोरञ्जन चेकआउट कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र कम्पनी, समाचार घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कम्पनी >> के मेरो बीमाले मलाई सिंगलकेयरको लागि फिर्ता दिन्छ?
जब तपाइँ तपाइँको प्रिस्क्रिप्शनमा बचत गर्नको लागि एकलकेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो बीमाको सट्टा हाम्रो बचतहरू प्रयोग गर्न रोज्नुहुन्छ। यो एक मानिन्छ नेटवर्कको बाहिर , बाहिरको जेकेट, वा तपाईंको बीमा कम्पनी द्वारा नगद खरीद। तर, तपाईं प्रतिपूर्ति पाउन योग्य हुन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं थोरै कागजी कार्यहरू गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने।
एकलकेयर कूपनको प्रयोगले तपाईंलाई औषधी वहन गर्न मद्दत गर्दछ यदि तपाईंसँग उच्च कटौतीयोग्य योजना छ, यदि तपाईंको बीमाले औषधि कभर गर्दैन भने, वा यदि हाम्रो मूल्य तपाईंको भन्दा कम छ भने copyay उपचार को लागी। तर यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो प्रक्रिया स्प्लिट बिलि is भनिने भन्दा फरक छ, जुन दुई बिमा योजनाहरू प्रयोग गर्दैछ, किनकि एकलकेयर बीमा होईन।
दोष यो हो: त्यो औषधी खरीद तपाईंकोमा स्वचालित रूपमा गणना हुँदैन घटाउन योग्य जब तपाईं एकलकेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्थ, यो तपाइँ तपाइँको लागत कवर भइरहेको नजिक मा प्राप्त गर्दैन - तपाईंको बीमा द्वारा, वा यदि तपाईं मा हो मेडिकेयर डोनट होल ।
त्यहाँ दुबै चीजहरू गर्न सकिन्छ, एकलकेयर मार्फत बचत गर्न, र कटौतीयोग्यमा प्रगति गर्न, तर यो ग्यारेन्टी छैन। प्रायः प्रमुख बीमा कम्पनीहरूसँग पर्चेको प्रतिपूर्ति अनुरोध प्रक्रिया हुन्छ। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँ औषधि को लागी भुक्तान गर्न जब तपाइँ फिर्ता भुक्तान गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको बीमा योजनामा ​​निर्भर गर्दै, बीमा कम्पनीले तपाईंलाई औषधीको लागि फिर्ता दिन्छ वा तपाईंको कटौतीयोग्यमा औषधीको लागत लागू गर्न सक्दछ।
म कसरी प्रिस्क्रिप्शनको लागि प्रतिपूर्ति पाउन सक्छु?
एक बीमा कम्पनी एक प्रिस्क्रिप्शन को लागी तपाइँ को क्षतिपूर्ति दिनेछ कि तिनीहरुको नीतिहरु मा निर्भर गर्दछ। धेरै स्वास्थ्य बीमा योजनाहरु एक प्रिस्क्रिप्शन को लागी तपाई को क्षतिपूर्ति हुनेछ यदि तपाईं:
zoloft ठीक छ जब स्तनपान को लागी लिन को लागी हो
गैर-सहभागी फार्मेसी प्रयोग गरियो
एक मिश्रित पर्चेको लागि भुक्तान गरियो
एक औषधि अनुमोदनको लागि प्रतीक्षा गर्दै थिए
तपाईंको बीमा कार्ड छैन
अमेरिका बाहिर औषधि किन्नुभयो।
फार्मेसी द्वारा गलत बिल गरिएको थियो
तपाईं आफ्नो बीमा कम्पनीलाई यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि एकलकेयरको साथ मूल्य बीमाको लागत भन्दा सस्तो थियो। तपाईं प्रतिपूर्तिको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ तपाईंले मेडिकेयर वा मेडिकेड मार्फत प्रिस्क्रिप्सन लाभहरू प्राप्त गर्नुभयो भने।
यो कब सम्म ibuprofen सुरक्षित छ
स्वास्थ्य बीमा प्रतिपूर्ति को लागी आवेदन गर्न को लागी:
प्रिस्क्रिप्शन प्रतिपूर्ति फारम भर्नुहोस्।
पर्चेको लागि फार्मेसी रसीद संलग्न गर्नुहोस्। (तपाईंको रेकर्डको लागि प्रतिलिपि बनाउन निश्चित गर्नुहोस्।)
फारममा निर्देशनहरू प्रयोग गरेर तपाईंको बीमा कम्पनीलाई रसीद र फारम पठाउनुहोस्।
धेरै जसो बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक गर्दछ कि तपाईले आफ्नो प्रिस्क्रिप्शन भरिसके पछि निश्चित समयावधि भित्र पुनःपूर्तिको लागि अनुरोध पठाउनुहोस्। त्यसोभए, कुर्नुहोस् र हेर्नुहोस्।
बीमा नीतिहरू भिन्न हुन्छन्, र तपाईंको परिणामहरू तपाईंको दावी प्रक्रिया गर्ने एजेन्टको आधारमा फरक पर्न सक्छ। तपाईको बीमा तपाईलाई फिर्ता लिन अस्वीकृत हुन सक्छ। वा, कम्पनीले तपाईंको कटौतीयोग्यमा तपाईंको भुक्तानी लागू गर्न सक्दछ, अधिक जानकारीको लागि तपाईंलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, वा तपाईंलाई फिर्ता। यदि तपाईं पैसा फिर्ता प्राप्त गर्नुभएन भने पनि, तपाईं सजिलैसँग आराम गर्न सक्नुहुनेछ तपाईं सिंगलकेयरमा कम खर्च गर्नुभयो तपाईं भन्दा बाहिरको जेब भन्दा।
टाउको चिसो को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि के हो
एस्पिरिन र एसिटामिनोफेन एउटै कुरा हुन्
कुकुर एलर्जी को लागी सबै भन्दा राम्रो ओटीसी एलर्जी औषधि
तपाइँ कति पटक डिपो शट पाउनु पर्छ?
के तपाइँ भ्यालियम र क्लोनोपिन सँगै लिन सक्नुहुन्छ